साम्राज्ञीले अब त ध्यान दिने कि ?
पाेखरा २४ साउन- नेपाली अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई आफै लाग्न थालेको छ कि, एउटै कुराले तनावमा छिन् । राम्रो काम गरेर फिल्म दर्शकमाझ पस्कदा पनि अन्य कुराले नै बढी ठाउँ लिदा उनलाई तनाव हुने भैहाल्यो । यही भएर पनि, साम्राज्ञी यती धेरै घृणा किन भनेर प्रश्न गर्न थालेकी छिन् ।
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले कतिपय कुरा सार्वजनिक गर्दा र बोल्दा अब ध्यान दिने बताइन् ?
साम्राज्ञीले इन्डोनेशियाको बालीमा प्रेमीसँग खिचाएको तस्वीरले अहिले पनि उनको पिछा छाडेको छैन । यही भएर नै हो, साम्राज्ञीको फिल्म मारुनीको ट्रेलर सार्वजनिक हुँदा पनि प्रतिक्रियामा सोही फोटोको गाली आइरहेको छ । अझ, उनले हाती लम्कदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ भनेर प्रतिक्रिया दिएपछि दर्शक उनीसँग रुष्ट छन् ।
साम्राज्ञी अब आफू यो कुराबाट बाहिर आउन चाहेको बताउँछिन् । यति धेरै घृणा किन भनेर उनी प्रश्न गर्न थालेकी छिन् । साम्राज्ञीले पनि महशुश गर्नुपर्छ कि, कलाकार भैसकेपछि दर्शकको चाहनालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । होइन भने, दर्शकले मन पराएनन् भने स्टारडम रहँदैन । कतिपय कुरा सार्वजनिक गर्दा र बोल्दा अब ध्यान दिने ?